Inuu ku daydo Ronaldo, hadii uu tartan diyaar u yahay, goolasha uu dhalin doono & Wax walba uu ka hadlay saxiixa cusub ee Los Blancos Luka Jovic. – Gool FM
Inuu ku daydo Ronaldo, hadii uu tartan diyaar u yahay, goolasha uu dhalin doono & Wax walba uu ka hadlay saxiixa cusub ee Los Blancos Luka Jovic.
(Madrid) 13 June 2019. Real Madrid ayaa soo bandhigtay shalay saxiixooda cusub Luka Jovic kaas oo noqday mid ka mid ah saxiixyada uu sameeyay Zidane xagaagan, xiddigaan dhalinta yar waxaa garoonka Santiago Bernabeu kusoo dhaweeyay 4,500 taageerayaal ah kuwaas oo nasiib u yeeshay iney arkaan isagoo markii ugu horreysay xiran maaliyada kooxda boqortooyada.
21-jirkaan ayaa soo jiitay dareenka kooxo badan kadib markii uu dhaliyay 21-gool kulamadii uu kooxdiisa u saftay horyaalka Bundesliga, sidoo kalana xiddigaan horay uga tirsanaa Eintracht Frankfurt wuxuu tartanka UEFA Europa League ka dhaliyay 10-gool.
Wuxuu ka hadlay waxyaabo badan oo isaga, ciyaartoyda saaxiibadiisa cusub iyo kooxdaba ku saabsan markii lagu soo bandhigay garoonka ay riyadiisa aheyd inuu mar uun ku ciyaaro.
“Waa mid ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan dunida [Benzema], waxaana rajeynayaa inaan wax ka barto” ayuu yiri Luka oo ka hadlayay wax ku saabsan Karim.
“Waxaan filayaa inaan tartami doono, balse Zidane ayaa leh go’aanka”
“Waxaan ahay qofka ugu farxadda badan dunida, waana ku faraxsanahay inaan joogo kooxda ugu weyn dunida”
“Waxey ii tahay farxad inaan kusoo biiro kooxdaan, wax walba ayaana siin doonaa”
“Ma sheegi karo tiro sax ah” ayuu ku jawaabay mar la weydiiyay waxa uu qaban doono fasalka soo aadan.
“Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican iyo inaan soo bandhigo waxaan awoodo”
“Waxaan imid koox aan wax badan ka baran karo, waxaan isku dayi doonaa inaan hormar sameeyo”
“Wali lama hadlin” ayuu yiri mar la weydiiyay hadii ay wada hadleen Zidane.
“Waxaan ciyaari doonaa meel walba, inaan kali ku ahaado weerarka, inaan weerar kale mataane la noqdo, halkaan waxaan u imid inaan dagaalamo”
“Waa run inaan ku seexan jiray maaliyadda Real Madrid markaan caruurta ahaa” ayuu yiri Luka
“Aabahey saaxiibkiis ayaa ii keenay, tan iyo markaan caruurta ahaa waxaan jeclaa Madrid, sababtoo ah waa kooxda ugu weyn dunida”
“Waa Ronaldo Nazario, balse hadda qofna ma calaamadin doono maadaama ay dhamaan noqon doonaan saaxiibadeyda kooxda” ayuu yiri Luka mar la weydiiyay xiddiga uu ku dayan jiray.
Sidoo kale xiddigaan wuxuu xaqiijiyay inuu si dhaqso leh ku aqbalay markii wakiilkiisa Fali Ramadan uu u sheegay inuu dalab kaga hayo kooxda Real Madrid.
Xulka qaranka gabdhaha France oo guul ka gaaray dhiggooda Norway kulan ka tirsan Koobka Adduunka ee Dumarka… + SAWIRRO
Bakhaara Real Madrid ee Dubai oo lagu iibinayo maaliyadaha Eden Hazard & lambarka uu xiran doono oo la xaqiiqsaday.